HARGEYSA, Somaliland - Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa ka hadlay colaadda kasoo cusboonaatey gobolka Sool iyo qabsashada deegaanka Tukaraq oo 8-dii bishan ay ciidamada maamulkiisa la wareegeen.
Kaahin oo Shir jaraa’id ku qabtey Hargeysa ayuu ka sheegay in Puntland iyo dowladda Federaalka ah Soomaaliya ay faragelin ku hayaan deegaanada Somaliland, kadib markii uu Wasiirka qorsheynta uu booqday Sool iyo Sanaag.
Wasiirka ayaa sheegay in Somaliland ay ka go’an tahay inay nabad kula noolaato deriskeeda, islamarkaana aysan doonaynin inay weerarto meel ka baxsan xuduuda ay la wadaagto Puntland.
Mar uu ka hadlayay xaaladda Tukaraq, waxa uu sheegay in magaaladaasi ay kamid tahay dhulka Somaliland, sidoo kalena ay ciidamadooda halkaasi u tagaan inay kahor tagaan faragelinta lagu hayo.
Maxamed Kaahin ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali “Gaas” inuu abuurayo xaalad colaadeed iyo dagaal ka dhaca gobolka Sool, oo hadda xiisad ay ka taagan tahay.
Wasiirka ayaa xusay in Ciidamo laga keenay gobollada Puntland la duldhigay Tukaraq, oo 70KM u jirta Garoowe kadib markii Todobaadkii tagey ay halkaasi ay qabsadeen ciidamada maamulka Somaliland.
Midowga Africa, Mareykanka iyo dowladaha Deriska ayuu ku waregliyay in Somaliland aysan mas’uul ka noqon doonin cawaaqibka ka dhasha duulaan lagu soo qaado deegaanadeeda.
Michael Keating, Ergayga QM ee Somalia ayuu sheegay in markii uu tagey Hargeysa la kulmay Madaxweyne Muuse Biixi iyo Gollaha Wasiiradda, iyadoo kawada hadleen xiisada Tukaraq.
Keating ayaa ku baaqay in xiisada la dejiyo sidoo kalena lagu dhameeyo khilaafka taagan wadahadal iyo qaab nabadeed, si aaney u dhicin dagaal cusub oo sababa burbur iyo bakarac gobolka Sool.
Somliland ayaa dagaal ku qabsatay Tukaraqa horaantii sanadkan xilli uu Farmaajo...
Puntland oo war kasoo saartay dagaalka Tukaraq [AKHRI]
Puntland 15.05.2018. 13:59